Fifidianana filoham-pirenena : Efa vita ny volavolana tetiandro -
AccueilSongandinaFifidianana filoham-pirenena : Efa vita ny volavolana tetiandro
Fifidianana filoham-pirenena : Efa vita ny volavolana tetiandro
22/06/2018 admintriatra Songandina 0
Eo anelanelan’ny faha-29 aogositra ka hatramin’ny 24 novambra no fotoana hanaovana ny fifidianana filoham-pirenena, araka ny volavolana tetiandro nalefan’ny vaomieram-pirenena mahaleo tena misahana ny fifidianana (CENI) eny anivon’ny governemanta. “Ny fanapahana navoakan’ny fitsarana avo momba ny lalàm-panorenana (HCC) ny amin’ny tokony hanaovana ny fifidianana mialohan’ny fotoana no anisan’ny nibaiko anay nandritra ny fandrafetana ny volavolana tetiandro” hoy Thierry Rakotonarivo filoha lefitr’ity andrim-panjakana ity. Efa tomombana ihany koa ny fikarakarana rehetra eo amin’ny lafin’ny ara-teknika, entina manatanteraka sy miatrika io fifidianana filoham-pirenena io raha ny fanazavany hatrany. Anisan’ny olana goavana mbola mipetraka kosa anefa ny eo amin’ny lafiny hoenti-manana amin’ny fikarakarana azy. Nitombo mantsy ny fandaniana vokatry ny fampiharana ilay lalàm-pifidianana vaovao. Raha 40 miliara Ariary izany teo aloha, dia tsy maintsy mihoatra izany rehefa ampiharina ity lalàm-pifidianana vaovao ity. Tsy nanome tarehimarika mazava momba io totalim-bola ilaina amin’ny fikarakarana ny fifidianana io ny filoha lefitry ny CENI, fa nilaza kosa fa tsy maintsy tadiavina io vola io raha tiana ho tomombana araka ny hiheveran’ny maro azy ny fifidianana.
Efa nalefa eny amin’ny governemanta ny talata teo ity volavolana tetiandro ity, ary miandry ny fanapahan-kevitra avoakan’izy ireo ao anatin’ny filankevitry ny governemanta raha ny fanazavan’ny CENI. Araka ny lalàna mantsy dia ny governemanta no tompon’ny teny farany amin’ny famaritana io datim-pifidianana io, miainga amin’ny volavolana tetiandro atolotry ny vaomieram-pirenena mahaleo tena mikarakara ny fifidianana. Andrasana araka izany io fanapahan-kevitry ny governemanta io, ahafantaran’ny maro ny daty raikitra hanaovana ny fifidianana filoham-pirenena. Etsy ankilany anefa misavoritaka ny amin’ny tokony hiatrehana na tsia ny fifidianana amin’ity taona ity indray ireo mpanao politika tsy niomana amin’izao fotoana izao. Misy mantsy ireo milaza fa mbola tsy tokony hirosoana aloha ny fifidianana fa ahemotra amin’ny fotoana mbola tsy fantatra. Izany hoe manosika ny mpitondra ankehitriny handinika ny fanapahana navoakan’ny CHH ireny mpanao politika ireny, ahafahana manao fiampangana vaovao indray. Efa mazava mantsy ny didy navoakan’ny fitsarana avo momba ny lalàm-panorenana, fa tsy maintsy atao amin’ity taona ity ny fifidianana.
Anarana iray tsy zoviana eo amin’ny tontolon’ny serasera sy ny diplomasia. Olona iray nahavita be teo amin’ny sehatry ny asa fanaovan-gazety i Maurice Tsihiavonana. Nahafantaran’ny maro azy ny famakafakana politika, ary maro ireo onjam-peo nitondrany ...Tohiny
Raharaha Houcine Arfa : Mpitsara iray voasambotra